LG mandefa ny finday voalohany modular: ny LG G5 | Androidsis
Efa miatrika ny andro lehibe ho an'ny LG isika ary amin'ny hetsika fampisehoana an'ny G5, ilay mpanamboatra Koreana dia mampiseho ny toetra tsara sy tombontsoa ny iray amin'ireo telefaona manan-danja indrindra amin'ity taona 2016. Taona iray tena miavaka noho ny fahasarotana lehibe hitan'ny orinasa amin'ny fahafahany manasongadina ny finday avo lenta izay aseho ho fotoana tsara indrindra. Orinasa am-polony mamoaka ny fitaovana tsara indrindra, famolavolana lehibe ary mari-pahaizana momba ny fifandanjana no mampihorohoro ny tsena. Hanana maro amin'ireto isika amin'ny andro manaraka, toy ny mitranga amin'ny Xiaomi, izay nijoro ho mpitarika ny finday avo lenta izay manana sandam-bola lehibe.
Tamin'ny fotoana nanolorana ny LG G5 tao amin'ny MWC, dia toy izany koa isika gaga amin'ny modularité-ny hahafahanao manova ny bateria mandritra ny iray segondra, toy ny nataontsika taona vitsivitsy lasa izay niaraka tamin'ny terminal maro. Saingy tsy teo ny fahagagana rehefa azo ovaina ilay maody bateria ho an'ny iray manokana ho an'ny fakantsary amin'ny LG Cam Plus na ho an'ny feo amin'ny LG Hi-Fi Plus. Finday manokana izay aseho amin'ny antsipirihany rehetra momba ny antsipirihany toy ny efijery 5,3-inch, puce Snapdragon 820, USB type-C na combo amin'ny fakan-tsary any aoriana misy fahaizany mivelatra
1 LG G5, tsy nampoizina
2 Smartphone finday Modular
3 Ireo naman'ny LG G5
4 Ny ao anaty
4.1 LG G5 famaritana
LG G5, tsy nampoizina
Juno Cho, filoha sady CEO an'ny LG, dia nampiseho tamin'ny olon-drehetra ny LG G5 vaovao izay nifantohany endrika manokana, ny hateviny manify ary fiasa manokana toy ny bateria azo esorina mba hahafahan'ny mpampiasa manana vola feno, toy ny tamin'ny taona vitsy lasa izay tamin'ny ankamaroan'ny telefaona Android. LG miaraka amin'ity hetsika ity dia maniry ny hanana mpampiasa bateria fanampiny ny mpampiasa mba hahafahan'izy ireo hanana ny fahaleovan-tena feno indray mba hahafahany mankafy ny asany isan'andro toa ny tambajotra sosialy, sary na lalao video.
Ny famolavolana vatana metaly feno dia singa iray lehibe indrindra izay nifantohan'ny LG tamin'ny minitra voalohan'ny famelabelarana io bara manokana any ambadika io izay misy ny solomaso fakan-tsary sy ny flash miaraka aminy. LG iray manana matevina manify be izay mamela azy hanolotra kalitao amin'ny fomba manokana.
Ny endri-javatra tsara hafa ao amin'ireo minitra fanokafana ireo dia ny efijery "eo foana" izay tian'izy ireo nanantitrantitra ny fizakan-tena lehibe an'ny terminal fa, raha manampy ny bateria esorina amin'ny fomba tena mora isika, dia hahafahantsika manakaiky ireo andian-tombony izay tsy mahazatra antsika amin'ny telefaona hafa. Ity efijery ity dia 5,3 santimetatra Quad HD IPS Quantum ary izay no ampidirina ny fampiasa "Alway On" voalohany hanehoana ny daty sy ny fotoana hatrany, na dia ao anaty fomba fatoriana aza ny LG G5.
Ny fiasa hafa amin'ity finday ity dia mandalo ny sasany Fakan-tsary 16MP sy 8MP eo aoriana miaraka amin'ny zoro malalaka sy eo anoloana 9MP. Eto izy ireo koa dia nanana minitra vitsy hanazavana ny tombony azon'ireo lantom-peo roa ireo izay mahaforona kombo miavaka. Ny combo fakan-tsary aoriana dia manana ny mampiavaka ny mason-tsivana 78 degre sy ny zoro 135 degre. Ity farany izay mahavita sehatry ny fomba fijery 1,7 heny mihoatra ny fakan-tsary mahazatra.
Smartphone finday Modular
Amin'ny alàlan'ny fanesorana ny bateria eo noho eo, ny G5 dia manana zavatra tsara hafa toetra ho an'ny modular amin'ny alàlan'ny fahaizanao mampita avy hatrany anao amin'ny fakan-tsary fakan-tsary tena tsara amin'ny LG Cam Plus, na ny fampiasa manokana miaraka amina rafitra audio hi-fi vaovao natao miaraka amin'ny Bang & Olufsen Play.
Ny finday avo lenta voalohany an'ny LG ho Hamela anao hanova azy io arakaraka ny lahasa inona ary izy io ihany no lasa mampiavaka ity finday ity alohan'ny hafa izay haseho anio izay hitranga amin'ny Galaxy S7.
Ireo naman'ny LG G5
LG Playground dia andiana fitaovana miaraka amin'ny G5 amin'ity traikefa nahafinaritra vaovao ity ho an'ny finday avo lenta izay lasa mahagaga tampoka. Manana ny solomaso zava-misy virtoaly LG 360 VR izay mifandray amin'ny alàlan'ny tariby mankany amin'ny G5 izahay ary manahaka ny fahitana ny fahitalavitra 130-inch miaraka amina vahaolana 639 ppi.
Ny iray amin'ireo namana dia a fakan-tsarimihetsika 360 degre LG 360 Cam. Tonga miaraka amina fakantsary 13 MP roa sy zoro 200 degre izy io. Ahitana bateria 1.200 4 mAh sy fahatsiarovana anatiny 360 GB, izay azo hitarina amin'ny karatra micro SD. Miaraka amin'ity fakantsary ity dia afaka mamorona atiny avo lenta 2 degre ianao ary manolotra horonantsary misy vahaolana 3 sy feo manodidina izay raketiny amin'ny alàlan'ny mikrôfony XNUMX namboarina.
Rolling Bot dia iray amin'ireo mpiara-dia aminy ary izy ihany boribory izay mihodina tahaka ny baolina ary izany dia mirakitra sary sy horonan-tsary amin'ny alàlan'ny fakantsary 8MP. Hevitra manana safidy hafa toa ny fampiasana azy hanaraha-maso ny trano, fanaraha-maso lavitra ny fitaovana mifanaraka aminy.
Telo no sisa tavela amin'ity ekipa mpiara-miasa ity izay hamadika ny LG G5 ho smartphone iray manontolo misy safidy isan-karazany fialamboly: ny headphones LG Tone Platinum tsy misy fangarony miaraka amina kalitao feo manasongadina an'i Harman Kardon, headphone hafa avo lenta H3 an'ny B&O Play ary ny LG Smart Controls mba hifehezana mora foana ny drôna sasany toy ny joystick.
Ny chip Qualcomm Snapdragon 820 dia mpanamory voafantina an'ny LG ho an'ny G5. Fampisehoana 64-bit, sary Areno 530 ary Qualcomm Hexagon DSP ambany hery. Ity puce Snapdragon 820 ity dia mampiditra modem LTE X12 izay manohana ny hafainganam-pandehan'ny CAT12 hatramin'ny 600 Mbps. Efa fantatray tamin'ny fidirana maro ny hatsaran'ity chip Qualcomm ity izay manana ny Adreno 530 GPU manana 40 isan-jato haingana ny fampisehoana sary ary mandany angovo 40% kely kokoa.
Ny antsipiriany hafa dia mandalo a Fahatsiarovana anatiny 32 GB, RAM 4 GB ary ny fahaizana manitatra fitehirizana anatiny amin'ny alàlan'ny karatra microSD (hatramin'ny 2TB). Android 6.0 Marshmallow, USB type-C ary bateria 2.800 mAh dia mitondra antsika ao amin'ilay LG G5 vaovao.
LG G5 famaritana
Mpikirakira: Qualcomm® Snapdragon ™ 820
Asehoy: Quantum HD IPS Quadum 2560-inch (1440 x 554 / 5,3ppi)
Fahatsiarovana: ROM 32GB UFS / 4GB LPDDR4 RAM / microSD (azo ovaina hatramin'ny 2TB)
Fakan-tsary: ​​Main: 16MP 8MP amin'ny zoro / Eo aloha: 8MP
Batterie: 2.800mAh (azo esorina)
Size: 149.4 x 73.9 x 7.7 ~ 8.6mm
Tambajotra: 4G LTE / 3G / 2G
Fifandraisana: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / USB Type-C 2.0 (3.0 mifanaraka) / NFC / Bluetooth 4.2
Colors: Silver / Titanium / Gold / Pink
Smartphone tsy mampino izay feno fonosana maodely marobe avadiho ho zavatra manokana. Ankehitriny dia tsy maintsy miandry isika satria ireo fahaiza-manao vaovao rehetra ireo, toy ny efijery "foana", ny plug-in modular isan-karazany ary ny endri-javatra hafa toa ny USB Type-C, dia tafangona mba hanolotra fahatsapana farany ho an'ireo mpampiasa mividy azy rehefa misy izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » LG dia manolotra ny LG G5, finday avo lenta voalohany miaraka amin'ny CAM Plus, Hi-Fi Plus, 360 VR, 360 CAM ary Rolling Bot
Mitsiriritra arivo haha!
Miandry anao ao amin'ny Power Hover ny biraon'i Marty McFly